Igwe ọkụ eletrik SK mini
Obere eriri eletriki winch/eriri eriri eriri Mini winch/hoist bụ obere mkpanaka ma dịkwa mfe ịrụ ọrụ. Ọ nwere ikike na 160kgs, 190kgs, 230kgs, 3000kgs, 360kgs na 500kgs. Mpempe ọkụ eletrik a pere mpe nwere obere ibu yana ọsọ ibuli ngwa ngwa. Sistemụ moto Usoro sistemụ moto na-eji usoro moto na-enweghị ahịhịa nke ọkwa ụlọ ọrụ nwere arụmọrụ dị elu. Voltaji nke obere winch eletrik bụ 220V, ma dabara maka ojiji obibi na ụlọ. Ngwa oke na -eme ka ọ na -arụ ọrụ n'enweghị nsogbu. Breeki System Dual br ...
Mkpagharị mkpanaka eletriki eletrik nke a bụ ngwaọrụ mkpanaka nwere ike ibuli elu ma ọ bụ traction, a na -ekewa ngwaahịa ahụ n'ime njikwa ime obodo na akwụkwọ ntuziaka abụọ, site na 220v ac action, ibu kachasị 500kg, nke a na -ejikarị na igwe, iwu, idozi ụgbọ ala, ọrụ ugbo, nnapụta. , injinia, ụlọ ọrụ, njikwa na mpaghara ndị ọzọ. Ngwaahịa a pere mpe, dị arọ ma dịkwa mfe ibu. Ejiri nchekwa oke ibu dị ugbu a, ndụ ogologo oge. Mmeghe ngwaahịa 1. Oke kachasị nke p ...
TD igwe eletriki eletriki
TD mini engine ụgbọ ala eletrik na-arụ ọrụ site na-agba ọsọ na nsọtụ ala nke ụzọ H, jikọtara ya na eriri eletriki ma ọ bụ eriri ọkụ aka ka etolite n'ime ụzọ nwere akwa, otu ụzọ ụgbọ oloko ma ọ bụ ogwe aka kwụsịtụrụ. Enwere ike iji ha mee ihe n'ọtụtụ ebe a na-eme mkpọtụ maka ịwụnye igwe na akụrụngwa na ogbako, ebe a na-egwupụta akụ, n'ọdụ ụgbọ mmiri, ọrụ igwe nkwakọba ihe, ịgba ntụtụ, mgbatị mkpakọ, nrụrụ aka, ịnwụ anwụ na saịtị ihe owuwu. Model TD 0.5 TD 1 gosiri C ...
Ọnụ ego GCL
GCT/GCL Series otu track trolley bụ ụdị usoro dị mfe, dị mfe ịrụ ọrụ, ọkụ na obere ụgbọ njem na -akwado igwe na -ebuli elu ma nwee njiri mara nke usoro dị mfe na ịrụ ọrụ dị mfe. Enwere ike itinye ya na Chain Hoist ma ọ bụ Electric Hoist ma ọ bụ igwe ọ bụla ọzọ na -ebuli elu iji mepụta trolley na -ebu ibu. Ọ nwere ike na -agba ọsọ ngwa ngwa na ala flange nke I beam track na okirikiri okirikiri maka ibudata na ibudata ngwongwo na akụrụngwa. Enwere ike kewaa Trolley na ụdị abụọ dabere ...
Igwe ọkụ eletrik HHBB
1, sistemụ breeki abụọ, echekwabara na ntụkwasị obi. 2. Nrụpụta dị elu, moto dị nfe, sistemụ breeki asbestos, oriri ike dị ala. 3, stampụ nchara nchara, ọkụ na ike, rustproof, corrosion na-eguzogide, na-eme ka ndụ ọrụ dị mma nke ukwuu. agbụ nchekwa.
Ụgbọ ala GCT Plain
GCT/GCL Series otu track trolley bụ ụdị usoro dị mfe, dị mfe ịrụ ọrụ, ọkụ na obere ụgbọ njem na -akwado igwe na -ebuli elu ma nwee njiri mara nke usoro dị mfe na ịrụ ọrụ dị mfe. Enwere ike itinye ya na Chain Hoist ma ọ bụ Electric Hoist ma ọ bụ igwe ọ bụla ọzọ na -ebuli elu iji mepụta trolley na -ebu ibu. Ọ nwere ike na -agba ọsọ ngwa ngwa na ala flange nke I beam track na usoro okirikiri maka ibudata na ibudata ngwongwo na ihe eji eme ihe.E nwere ike kewaa trolley na ụdị dependi abụọ ...
Nkọwapụta jakị magnet na-adịgide adịgide nwere ihe ndọta na-adịgide adịgide NdFeB iji mepụta sistemụ ndọta siri ike. Site na ntụgharị aka ahụ, a na -agbanwe ike ndọta nke sistemụ ndọta siri ike iji nweta mmịpụta na mwepụta nke ihe ọrụ. Akụkụ elu nke jaakị nwere mgbanaka mbuli elu maka ibuli ihe ahụ, a na-enyekwa uzo nwere V maka ijide ihe cylindrical kwekọrọ. The elu-arụmọrụ na-adịgide adịgide magnet ihe eji ...
A na-ekekarị obere ọkụ eletrik n'ụdị edozi na ụdị ịgba ọsọ, dabara maka oge dị iche iche, nwere ike ibuli ngwongwo kilogram 1200 ndị a, ọkachasị dabara maka ụlọ ndị dị elu site na ọkwa dị ala iji bulie ihe ndị ka arọ. Ọdịdị dị mfe, nrụnye dị mfe, obere na ọmarịcha, ma jiri ọkụ eletrik otu-oge dị ka isi ike. Igwe ọkụ eletrik pere mpe erutela ụkpụrụ mba ụwa na mmepụta na imewe, nke na -ahụ maka nchekwa nke iji ya. Igwe ọkụ radiator moto ...
Oghere ọkwa 80
Ihe: elu mma alloy steel ọgwụgwọ elu: agba onwe, polishing, gbara ọchịchịrị, ese, mkpuchi plastik, mikpuo ọkụ, galvanized eletriki, wdg Nhazi nrụpụta: ISO, DIN, BS, JIS, ASTEM Ọkwa ọkwa: min.4 ugboro yinye dị ka ihe ndị ahịa chọrọ si dị
KCD ọtụtụ ihe arụ ọrụ
Igwe eji arụ ọrụ ọtụtụ nwere njirimara nke ọsọ braking ngwa ngwa, obere olu, ịdị mfe, obere kọmpat, dị mfe iji na ndozi dị mfe. O nwere 300-600kg, 400-800kg, 500-1000kg 750-1500KG, 1T-2T, ogologo nke eriri waya nwere ike ịhazi ya dị ka ihe ndị ahịa chọrọ si dị. Multi-ọtọ ndoli nwere ike a ga-eji na-ewu ụlọ, ash brik, ibu ụlọ nkwakọba ihe, nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, onye noo, obere ụlọ mmepụta ihe, nwere ike ime ka ọ bụla n'akuku nke na-akpụ akpụ, na-eweli, l ...
Akwụkwọ ntuziaka Hydraulic Forklift Hand Pallet Jack 3 ton Hand pallet Truck Akwụkwọ ntuziaka hydraulic mgbapụta AC pallet dị mfe ebuli forklift gwongworo 2T, 2.5T, ikike 3T 1.Rubber ntekwasa aka 2.Fuful zuru ezu ntụ ntụ ahụ 3.Hard chrome plated piston 4. ahu galvanized 5. Nnukwu dayameta siri ike nchara steetị 6.Tandem siri ike nchara ibu rollers Nkọwapụta ngwaahịa Ike Min elu Max elu Ogologo (mm) Obosara (mm) Wheel 2 80 200 1150 550 Nylon/PU/Rubber 2 80 200 1200 685 nylon/ PU/Rubber ...
Micro Electric eriri eriri, Ntuziaka Lever Chain ndoli, Bannon Electric Hoist, Jet 1.5 Ton Chain ndoli, Igwe ọkụ eletrik eletrik, Lever Puller,